Ukunemba kumasampula, ukulungiselela, ukuhlola, ukuphatha, ukukala kubaluleke kakhulu ekuhloleni umlilo,
njengoba amaphutha azothonya ubuhlalu begolide bokugcina obungu-0.0001 g ngezinye izikhathi ngezilinganiso zezinkanyezi, uma enziwa ngendlela engafanele, kusetshenziswa izindlela ezingezona ezesayensi, kanye nokunaka okuncane okukhokhwa kwinqubo yokuhlola.
Kubalulekile ukukhetha izinga eliphezulu le-fire assay clay crucible
I-Fire Assay Crucibles abe nokungazweli okungaphezu kokujwayelekile kokuqhekeka ngaphansi kwezimo zokuhlola umlilo. Ama-crucibles ethu asetshenziswa kumalabhorethri kuzo zonke izimakethe zomhlaba. Sinezinhlobonhlobo zomumo nosayizi abatholakalayo ukubhekelela imininingwane edingekayo.
Ama-crucibles ethu anikeza ukuphila okude, ukuncibilika okusheshayo, isivinini esingapheli sokuncibilika kanye nokumelana okuyingqayizivele nezinguquko ezinobudlova zezinga lokushisa.
Into: Ukuhlolwa komlilo crucible
Uhlobo Lwenqubo: Ukugoqa
Okubalulekile: I-SiO2 + Al2O3
Ukubekezelela: +-2 mm
Indawo: Okuzenzakalelayo imishini yokubumba
Izitifiketi: ISO9001 SGS
Ukuthumela: Izitoko eziningi, isikhathi sokulethwa cishe 5-10days. ngolwandle noma ngomoya njengekhasimende isicelo
Ukulethwa& Isevisi: Kufike ngesikhathi ukulethwa isikhathi ngasinye. Nikeza isevisi ethembekile futhi unesibopho ikhasimende ngalinye nomkhiqizo ngamunye. Eyethu umgomo uwukwanelisa wonke amakhasimende ngesevisi engcono kakhulu.
L.O.I(ukulahlekelwa ekushiseni) 0.21%
Ikhwalithi ilebhu yobumba yobumba Umkhiqizi | I-XTL
lab ceramic crucibl uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe.I-XTL ifingqa ukukhubazeka kwemikhiqizo edlule, futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-lab ceramic crucible ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.